မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အခွန်လျာထားချက်ထက်ကျပ်သန်းလေးထောင်ကျော်ပိုမိုကောက်ခံရရှိ | Hotnews Weekly Journal
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အခွန်လျာထားချက်ထက်ကျပ်သန်းလေးထောင်ကျော်ပိုမိုကောက်ခံရရှိ
ဒေသတွင်းအခွန်ထမ်းပြည်သူများ ထံမှ ၀င်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်ခွန်၊ အထူး ကုန်စည်ခွန်၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် အောင် ဘာလေအခွန်အရပ်ရပ်အားလျာထား ချက်များရေးဆွဲကောက်ခံခဲ့ရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်အခွန်လျာထား ချက်ထက် ကျပ်သန်း ၄၆၄၈ ဒသမ ၇၇၁ သန်း ပိုမိုကောက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်တွင်းအခွန် များဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ကုန်သွယ်ခွန်လျာထားချက်ကျပ် သန်း ၈၇၃၇.၀၄၁ တွင် ကျပ်သန်း ၁၃၄၀၈.၆၅၂ ကောက်ခံရရှိပြီး ၁၅၃. ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းရရှိကြောင်း ၊ အထူး ကုန်စည်ခွန်လျာထားချက်ကျပ်သန်း ၃၃ သန်းတွင် ၁၀၂၇.၅၉၄သန်း ကောက်ခံရ ရှိပြီး ၃၁၁၃.၉၂ ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည့် အတွက် အများဆုံးရာနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်လျာထားချက် ကျပ်သန်း ၅၆၀ တွင် ကျပ်သန်း ၇၀၈. ၃၁၁ ကောက်ခံရရှိပြီး ၁၂၆.၄၈ ရာခိုင် နှုန်းရရှိခဲ့ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီးအခွန်ဦးစီးမှူးဦးကျော်သိန်းကပြော သည်။
၀င်ငွေခွန်လျာထားချက်ကျပ်သန်း ၇၄၇၅.၇၀၆ တွင် ကျပ်သန်း ၆၃၂၂. ၃၃၉ ကောက်ခံရရှိပြီး ၈၄.၅၇ရာခိုင်နှုန်း သာရရှိခဲ့ကြောင်း ၊ အောင်ဘာလေတွင် လျာထားချက်ကျပ်သန်း ၂၇၄.၂၅၃ တွင် ကျပ်သန်း ၂၆၁.၈၇၅ ကောက်ခံရရှိပြီး ၉၅.၄၉ ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ကုန်သွယ်ခွန်၊ အထူးကုန်စည်ခွန်၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်များတွင် လျာထားချက် ထက်ပိုမိုကောက်ခံရရှိပြီး ၀င်ငွေခွန်နှင့် အောင်ဘာလေတို့တွင် လျာထားချက် အောက်ကောက်ခံရရှိမှုများရှိခဲ့သော်လည်း အခွန်အရပ်ရပ်အတွက် ကျပ်သန်း ၁၇၀ ၈၀ သန်းလျာထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ကျပ်သန်း ၂၁၇၂၈.၇၇၁ ကောက်ခံရရှိ ခဲ့ကြောင်း ၊ ရာနှုန်းအားဖြင့် ၁၂၇.၂၂ ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ပြီး အခွန်ငွေကျပ်သန်း ၄၆၀၀ ကျော် ပိုမိုကောက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ဌာနမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ဌာနအနေဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်ရာတွင် အခွန် ဥပဒေနှင့် အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများပြောင်း လဲခြင်းအပြင်အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုများက လည်းပြောင်းလဲနေကြောင်း ၊ OAS ( Offical Assessment System ) မှ SAS (Self Assessment System) သို့ပြောင်း လဲဆောင်ရွက်နေရာတွင်ကုမ္ပဏီများအား စတင်၍ SAS စနစ်သို့ ပြောင်းလဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအခွန် ဦးစီးမှူးဦးကျော်သိန်း၏ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။